cunto American | USAHello | USAHello
Haddii aad ku cusub tahay USA, laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u barato oo ku saabsan cunto American. Waxaa hubaal in aad dareentay in ay jiraan kala doorashooyin badan! Raadi wax ku saabsan cunto American iyo cuntada dugsiga ee carruurta. Baro sida loo soo bandhigo Americans cuntooyin ka dalkaaga hooyo. Eeg siyaabo kala duwan in ay la tacaalaan dhaqanka ku saabsan cuntada.
Qabsashada cunto American
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay in la arko sida badan waxaa jira doorashooyin cunto ee USA. Waxaa jira noocyo badan oo cunto ah in dhammaan noocyada kala duwan ee baakadaha. Miraha iyo khudaarta laga iibsan karaa xitaa marka aan la xilli. Waxaad arki doontaa in maqaayadaha ka dhaqamo badan oo kala duwan oo u adeega cuntada. cuntada Fast waa caanka ah ee dalka Mareykanka. Waa ay fududahay in si deg deg ah u hesho hadhuudh ah oo raqiis ah, iyo xataa inay soo iibsato aan aad ka baxaysid baabuur.
cunto caafimaad qabin American
cuntooyin badan oo American, cuntooyin gaar ahaan dhakhso, oo dalka Mareykanka ah waxaa ku jira sonkor ama sheyga (waxyaabaha lagu daro cuntada si ay u dheer). miraha iyo khudaarta badan ayaa lagu buufiyay sunta cayayaanka, kuwaas oo ah kiimikada loo isticmaalo beeraha iska sii cayayaanka. Jirkaaga looma isticmaali karo in noocyada cuntooyinka si waxaa laga yaabaa in aad dareento xanuun marka hore ama laga yaabaa in ay helaan miisaanka. Wax gubaya, cuntooyinka unhealthful waa dhibaato waayo badan oo Maraykan ah, qaata arrimaha caafimaadka u cayilan iyo waayo-aragnimo. Inkasta oo laga yaabo inay ku faraxsan aad in ay isku dayaan cuntooyin cusub, waxaad dooran kartaa in ay sidaa sameeyaan si tartiib tartiib ah, si ay u ha jirkaaga qabsato.
Haddii aad isku dayayaan in ay healthfully oo raqiis cuni, waxaad u baahan doontaa in aad ka fogaato wax cunaya at maqaayado badanaa. cuntada u adeegay in maqaayadaha ku socotaa in yar oo caafimaad qaba oo ku jira kaloori badan, kuwaas oo halbeeg lagu cabbiro sida badan tamarta cuntada uu leeyahay. Jalaato, tusaale ahaan, ayaa calories badan. Miraha iyo khudaarta waxay leeyihiin calories ka yar.
views American oo cunto ah soo galootiga
Americans Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in aan isku daynay cuntada aad u cuntid ee aad wadankaaga hooyo. In magaalooyinka waaweyn, waxaa jira maqaayado badan oo qowmiyadeed oo sidaas dadka u leeyihiin waayo-aragnimo dheeraad ah oo ka mid ah cuntooyinka shisheeye. In magaalooyinka yaryar, kala duwan dhaqanka yar, dadka ma laga yaabaa in sida soo maray.
Ku billow suxuunta cusub
Dadka Maraykanka badidoodu waxay u furan yihiin isku dayayaan noocyo cusub oo wax lagu karsado oo noqon doona cajiib ah in ay isku dayaan suxuunta cusub. Dad badan oo Maraykan ka qayb "potlucks,"Kuwaas oo isugu bulshada halkaas oo qof kasta oo keenaya saxan in ay wadaagaan. Potlucks dhacaan isugu weyn ama casho caadi ah. Tani waxay noqon kartaa fursad wanaagsan oo dadka kale soo bandhigo in aad cunto, labada xaaladaha dugsiga iyo bulshada. Waxaad kaloo ugu yeeri kartaa dadka ka weyn casho oo aad u adeegtaan suxuunta ka dhaqankaaga. Dadka qaar ayaa laga yaabaa in aanay u furan isku dayaya cunto cusub, Si kastaba ha ahaatee, oo waxaa muhiim ah in ay ixtiraamaan in.
Cuntada dugsiga carruurta
Ardayda ku jirta dugsiyada American aadan helin quraac marka laga reebo in qaar ka mid ah dugsiyada barbaarinta carruurta yar-yar. Carruurta cuno intaanan waxay tagaan dugsiga, inkastoo dugsiyada qaar ka mid ah carruurta ka iibsan kartaa quraac yar ee maqaayadda dugsiga.
Qado iyo cuntooyin fudud
at qadada, caruurta midkood ka iibsan karaan cunto ama cunto guriga keeno. Xirxiraan qado carruurtiinna, waa habka ugu fiican si loo hubiyo in carruurta aad leedahay cunto caafimaad leh, tan iyo dugsiyo badan u adeega cuntooyinka iyo cabitaanada sonkorta leh caafimaad qabin. Carruurta in USA ay sidoo kale dugsiga la keeno "fudud". Kuwani waa qadar yar oo cunto ah in ay cunaan inta lagu jiro nasashada u dhexeeya fasallada. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah miraha, nuts, baararka granola, ama buskudka.
Caawimada qarashka cuntada
Haddii qoyska uusan haysan lacag aad u badan, mararka qaarkood dugsiga ku siin doonaa lacag la'aan ah (ama jaban) cuntada, ay ka mid yihiin quraac, ilmahaaga. Dugsi kasta waa ka duwan yahay, sidaas darteed waxaa fiican inaad la hadasho macalinka ilmahaaga ama xoghayaha dugsiga aad qabto wax su'aalo ah.
Waxaa suuro gal ah in carruurta laga yaabaa xiiso leh ee ilmahaaga cunista cuntada aan la aqoon. carruurta ka yar yihiin mararka qaarkood ka cabsan waxyaalaha cusub iyo qabaa in gardaraysi dadka kale waa jidkii toosnaa, inaan la wax uga qabtaan. Waa in aad kala hadasho ilmahaaga oo ku saabsan this, si ay La yaab ma leh ama mid aad u kacsan, haddii ay taasi dhacdo. Ilmahaagu dooran kartaa in uu sharaxo waxa cuntada laga sameeyey oo ka mid ah, sida suxuunta qowmiyadaha qaar ka mid ah waxaa ku jira waxyaabaha la mid ah kuwa ku cuneen oo USA. Haddii carruurta aysan xiiseyneynin, ilmahaaga dooran karaan in ay socdaan xaaladda ka. waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in la doorto koox oo kala duwan oo saaxiibbadiis ah.
Haddii carruurta ay sii wadaan si ay u sameeyaan xiiso leh doorashooyin ilmahaaga oo cunto ah, adiga ama ilmahaaga waa inay kala hadlaan macalinka oo ku saabsan xaaladda. istiraatiijiyad kale waxay noqon lahayd inaad la hadasho macalinka ku saabsan abaabulka hawl taas oo cunto noqon kartaa fursad waxbaridda ku saabsan dhaqanka. Waxaad ka dhigi kara qadar weyn oo cunto ah ee fasalka, oo waa la wada hadleen lahaa oo la wadaago
siyaabo edeb inuu hoos u cunto American
Haddii aad lagu martiqaaday in ay qof ee guriga cunto ah oo uusan cuni karin cunto gaar ah sababtoo ah diinta ama dhaqanka, waa in aad dareento raaxo leh ku sharaxay in aad ciidankii oo xirma. Waxaa ku haboon in arrintan loo sameeyo ka hor inta aadan u tag dhacdo. Maraykanka intooda badan waa mid aad u ixtiraam dadka kale cuntada iyo xitaa waxaad weydiisan kartaa su'aalo badan oo ku saabsan meesha aad ku nooshahay bartaan. Haddii aad cuntay ku filan, mana doonayo in wax cunto dheeraad ah, ma aha edeb darro ah in la yidhaahdo, "Maya mahadsanid, Anigu waxaan ahay buuxa,"Xataa haddii ay martida u yihiin waxa ay bixisaa marar badan.
Lagama ama adag-to-ka heli cuntooyinka
Cuntada qaar ee aad waxaa loo isticmaalaa in cunista wadankaada hooyo sidoo kale aan la heli karin ama waa laga hadlin. Lagama ka dhigan tahay habboonayn ama Reebay gudahood dhaqan. Qaar ka mid ah hilibka, sida hilibka faraska iyo xubnaha qaar ka mid ah xoolaha, aan la iibin ama la cunay. Dad badan oo Maraykan qabaa cunista ilmaha ama uurjiifka xoolaha waa khalad. Cayayaanka sidoo kale ma tahay qayb ka mid ah cunto dhaqameedka, laakiin waxa aad mararka qaarkood ka heli kartaa qaar ka mid ah suuqyada qowmiyadaha.
In America, waxyaabaha caanaha laga sameeyo waxaa la karkariyey (kulul) si ay u disho bakteeriyada, iyo caano cusub iyo farmaajo in aadan geedi socodka this ha la iibin karo. Qaar ka mid ah midhaha, sida mangosteen iyo askee, aan la iibiyo Mareykanka sababtoo ah waxaa loo arkaa khatar.